AKHRISO:- Yuusuf Garaad oo qaray maqaal uu cinwaan uga dhigay ”Isteerinka Arrimaha Dibadda Soomaaliya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Yuusuf Garaad oo qaray maqaal uu cinwaan uga dhigay ”Isteerinka Arrimaha Dibadda Soomaaliya
Hiiraan Xog, Sep 29, 2017:- Dalka Soomaaliya waa mid ka soo kabanaya dagaal sokeeye. Geeridii, dhaawacii, qaxii iyo burburkii dagaalka sokeeye dartood, konton iyo toddoba sano ka dib Dowladnimada Soomaaliya waa mid mar labaad socod-barad ah oo hadda la kabkabayo una baahan koolkoolin iyo in loo turo.
Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada waxaa ka dhexeysa wadashaqeyn fiican xagga siyaasadda iyo xagga amnigaba. Khilaafna kama jiro Arrimaha Gudaha ee dalka. Arrimaha Dibaddana go’aankeeda waxaa leh
Madaxweynaha Jamhuriyadda iyo Xukuumadda Federaalka.
Soohdinta Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada marka ay joogto Arrimaha Dibaddu uma baahna fasiraad
badan marka aad akhriso Dastuurku sida uu u qeexayo.
W/Q: Wasiirka A/Dibadda Somalia Yuusuf Garaad
Taliyaha Guud ee Ciidamada dalka Turkiga oo soo gaaray magaalada Muqdisho